Canvas Prints | Galeriana ROYI ART
Miaraka amin'ny antoky ny fahafaham-po 100% sy fivarotana an-tserasera azo antoka, afaka mividy Canvas Prints andrana fanendrena tena tsara ianao izao.
Ny fanonon-tena ataonay dia noforonina miaraka amin'ireo haitao printy digital nomerika farany azo antoka sy tsy misy fofona. Ny sokajy mason-tsavitrika masira ampiasainay dia mamoaka fiovana maranitra sy mavitrika amin'ny kanadiana miangaro vita amin'ny landy matevina izay marefo ihany koa.
Ireo artista amin'ny fahalalana dia hampitandrina anao amin'ny lavitra pirinty laser ary hitari-dalana anao ho an'ny vokatra inkjet. Amin'ny maha-fitsipika ankapobeny ny fanetsiketsehana, dia ny Epson, HP ary Roland no mpandray anjara lehibe. Na dia eo aza ireo marika sy ireo masinina ireo, misy ny tsy fitoviana.
Ny fanaovana pirinty kanvas rehetra dia atsangana ary vonona ny hanantonana amin'ny fampiasana maharitra, sy ny hazo azo antoka amin'ny tontolo iainana sy ny fitaovana vita amin'ny hazo manodidina ny 1,5 santimetatra.
Raha mampiasa loko loko miorina amin'ny rano izy, dia mety hahita fa hiatrika fanovana vitsivitsy izay tsy ekenao ny sarinao. Ho an'ny zavakantoo, dia mandoa vola izany amin'ny fandokoana loko vita amin'ny pigment izay tsy matavy. Ny ankamaroan'ireny vokatra ireny dia tsy marefo amin'ny fiparitahan'ny UV, izay tena ilaina rehefa te-haharitra ny asa-tanana ataonao izy ireo haharitra tamin'ny fiandohan'ny taom-polo na taonjato.
Atodiho ho sarona miaraka amin'i Royi Art ny sarinao.
Ny sarinay amin'ny kanvas dia tsara ho an'ny haingoana ny tranonao na ny birao, ary tonga lafatra toy ny fanomezana sary.
Mifandraisa aminay anio ary ny iray amin'ireo manam-pahaizana manokana dia homena ny kaontinao ary hihaona aminao tsy ho ela.
Vonona ny hanampy anao amin'ny fanontaniana na fangatahana.
filanjana-ponja , diloilo hanao hoso-doko amin'ny lamba , -tanana solika hanao hoso-doko , Contemporary Oil Painting , Abstract solika hanao hoso-doko , Oil Painting , ny rehetra Products